galmudugnews.com » Daawo Video Dagaalkii Garxajis iyo Huwantii Habarjeclo la safneed 1994-1997
Home » WARARKA, XULKA Galmudugnews » Daawo Video Dagaalkii Garxajis iyo Huwantii Habarjeclo la safneed 1994-1997 Daawo Video Dagaalkii Garxajis iyo Huwantii Habarjeclo la safneed 1994-1997 admin on
No Comment Views 1610767 Muuqaalkaan waxaa diyaariyay oo duubay Wasiirka ku xigeenka Warfaafinta Somaliland Abdullahi Cukuse wuxuuna muujinayaa isagoo caay u dhiteeynaya allaha u naxariistee Mohamed Ibrahim Haji Ibrahim Cigaal iyo Beelaha Isaaqa ee Habarjeclo iyo Habar Awal ugu horeeyaan.
Sida uu Cukuse codkiisa ku sheegay wuxuu ahaa Wariyahii qaaska ahaa ee Jabhadii SNM garabkii Garxajis,wuxuuna duubayaa sidii beesha Habarjeclo looga adkaaday dagaalkii Burco iyo Jabkii gaaray.
Abdullahi Mohamed Dahir Cukuse hadii uu muuqaalkaan arko wuxuu ku noqon karaa la yaab uu xanuun ka qaado maxaa yeelay waa mid shaqsiyadiisa sawir guud ka bixinaya.
Waa suurtagal inuu xilkiisa ku waayo hadii Filmkaan ay daawadaan Siyaasiyiinta Habarjeclo iyo Habar awal ee beesha Isaaq.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139606 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31895 hitsContact US - 30620 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26181 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25653 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25299 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23908 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23068 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22428 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22381 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21479 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21148 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21143 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20843 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19892 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19884 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19286 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18521 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17828 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17767 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17695 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16911 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16844 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15548 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15499 hits Home Contact US